NANTSI INDAWO YOKUTHENGA IVEJA SNEAKERS ZIKAKATE MIDDLETON - UHLOBO
Nantsi indawo apho unokufumana i-Kate Middleton's Favorite Comfy Veja Sneakers
UChris JacksonImifanekiso kaGetty
UKate Middleton uthathe uhambo oluya kwiMyuziyam yaseLondon yezeMbali ngelixa enxibe izihlangu azithandayo zeVeja.
IVeja yayiluphawu lokuqala lwezihlangu oluzinzileyo lwaseFrance ukwenza iiteki ezinezinto ezisemgangathweni eziphinde zaphindwa zasetyenziswa, ikotoni yendalo kunye nesikhumba esomeleleyo.
Apha kulapho unokuthenga khona isibini ngqo, kunye nezitayile ezifanayo ezivela kuphawu.
UKate Middleton waziwa ngesimbo sakhe somzamo. Ngokungafaniyo namalungu amaninzi osapho lwasebukhosini phambi kwakhe, iiDuchess zaseCambridge zihlala zibonwa zinxibe iiteki ezimnandi-kwaye masinyaniseke, asimsoli. Ke xa wayesandula ukutyelela iMyuziyam yaseLondon yezeMbali kwiT-shirt emhlophe, iwash yokukhanya ijini , kunye neeteki ezimhlophe zesikhumba ezivela eVeja, kuye kwafuneka sizifunele iperi.
Ngqo kaKate Jonga i-Esplar Bicolor Leather Sneaker ezisezantsi okwangoku zifumaneka ngobungakanani obulinganiselweyo eBergdorf Goodman nge $ 120. Nangona kunjalo, kukho eminye imibala yeVeja kunye nezitayile zokuzama ukufikelela kuzo I-Nordstrom , I-Avenue yeSaks yesihlanu , INet-A-Porter , IZappos , nkqu IAmazon .
Jonga i-Esplar Bicolor Leather Sneaker ezisezantsibergdorfgoodman.com$ 120,00 THENGA NGOKU Jonga iSneaker esasazekayoyamva.com$ 120,00 THENGA NGOKU Jonga iSneakers Fieldnet-a-porter.com$ 140.00 THENGA NGOKU IVeja V-10 Yesikhumba Metallic ILogo I-Sneakers ezisezantsi-Phezulusaksfifthavenue.com$ 150,00 THENGA NGOKU
Ezi zikhululekile izihlangu zokuhamba bonisa uzwane olujikeleziweyo nolusu oluphezulu lwesikhumba, kunye neenyawo zerabha ezingqindilili. Izihlangu ezimhlophe ze-100% zomqhaphu, ngelixa ulwelo lwangaphakathi lwenziwe ngeebhotile zeplastiki ezihlaziyiweyo eziyi-100%, ukunceda ukubonelela ngokuguquguquka okukhulu kunye nentuthuzelo enkosi kulwakhiwo lwayo lwemesh. Ngaphandle kwesihlangu, uya kufumana umqondiso we-logo ye-V eyenziwe yerabha kunye nenkunkuma yerayisi. Ngokubanzi, yonke i-sneaker yenzelwe ukugxila kwe-eco-friendly.
Kwakhona asinakugqitha kuyilo oluncinci kunye nendlela ekulula ngayo ukunxiba la ma-sneaker phezulu okanye ezantsi, engqinwe ziiDuchess uqobo. Ngengubo yangaphambili kuhambo lwe-alma mater yakhe, kwiDyunivesithi yaseSt Andrews, uKate wayenxibe inkangeleko ephefumlelweyo enombala ofanayo weehempe ezimhlophe kunye neeteki zegolide ezigqityiweyo, ezigqitywe nge-blazer emnyama kunye nesinqe esiphakamileyo, esithe nkqo ibhulukhwe yomlenze.
Ke nokuba ubukhe wakhangela kwi izihlangu ezifanelekileyo zokuhamba kwikhefu lakho elizayo, okanye ufuna nje ukwenza ijezi ujonge ukubonakala kwehlobo, ezi zihlangu ezinamakhonkco ziya kuba yindawo ekhuselekileyo yokubheja eyamkelweyo yiDuchess.
Inombolo yeengelosi ezingama-777 ezinentsingiselo
kukho ingqele ejikelezayo
esona siseko sisiso sehlobo kulusu olunamafutha
Imvakalelo engaqhelekanga esifubeni nasemqaleni
Intsingiselo yenani leengelosi ezingama-777